थर्मोमिक्सको साथ सलाद र तरकारीहरू थर्मोराइकिप्स (पृष्ठ २)
डिनर तयार गर्न समय छैन? हामी तपाईंलाई ह्यामसँग केही आर्टिचोकहरू कसरी तयार गर्ने भनेर देखाउँछौं। Thermomix® को साथ स्वस्थ, छिटो र सजिलो डिश।
स्याउ र पार्सनपको साथ प्यूरी गार्निश गर्नुहोस्
फ्रेन्च फ्राइज बिर्सनुहोस्! स्याउ र पार्सनिपको साथ स्वादिष्ट गार्निश तयार गर्नुहोस्। यो विकल्प धेरै कम क्यालोरी छ।
प्याज संग9अचूक व्यञ्जनहरु
9 अचूक व्यञ्जनहरु प्याज को सबैभन्दा बाहिर प्राप्त गर्न को लागी, कुनै पन्ट्री मा त्यो आधारभूत घटक
मकरोनी र ब्रोकोली को लागि यो नुस्खा पास्ता, तरकारी को सबै भन्दा राम्रो संयोजन र Béchamel सॉस को साथ परोसाइएको छ। एक वास्तविक खुशी।
Sauerkraut र आलु आधार संग सॉसेज quiche
यो आलु आधारित सॉसेज र सॉसेज quiche संग तपाइँ सब्जियों मा आधारित र स्वाद को एक अनौपचारिक डिनर तैयार गर्न सक्नुहुन्छ।
हैम संग मटर एक पौष्टिक, स्वस्थ, र भिटामिन र खनिज पैक डिनर को लागी अग्रिम गर्न सकिन्छ।
आलु र गाजर प्यूरी
यो आलु र गाजर प्यूरी मासु र माछा बर्तन संग र उनीहरुलाई अतिरिक्त भिटामिन र खनिज दिन को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के तपाइँ स्ट्यु र स्ट्युहरू मन पराउनुहुन्छ? यो जिप्सी पट्टिको लागि निश्चित गर्नुहोस्, तरकारी र फलहरू बनाएर बनाइएको स्ट्यु।
ग्लुटेन-मुक्त चिकन र तोरी lasagna यसको स्वाद को लागी एक आश्चर्यजनक नुस्खा हो र किनभने यो बिना पास्ता बनाइन्छ।
यो मशरूम क्रीम संग तपाइँ एक प्रकाश, स्वस्थ र स्वस्थ नुस्खाको आनन्द लिनुहुनेछ। तपाइँको डिनर को लागी यो प्रयोग बन्द नगर्नुहोस्।
के तपाइँ सब्जियों को एक धेरै छ र तपाइँ उनीहरु संग के गर्ने थाहा छैन? हामी तपाइँ प्रयोग को एक पौष्टिक क्रीम प्रस्ताव।
आधारभूत नुस्खा: पिको डे gallo
यो आधारभूत पिको डे गैलो नुस्खा संग तपाइँ आफ्नो मेक्सिकन व्यंजनहरु को लागी ताजा र मसालेदार रंग को एक स्पर्श थप्न सक्नुहुन्छ।
मशरूम र arugula carpaccio
मशरूम र arugula carpaccio एक सरल र हल्का नुस्खा हो कि तपाइँ एक स्टार्टर को रूप मा वा एक गार्निश को रूप मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
द्रुत तरकारी कोका
तपाइँका बच्चाहरूले तरकारीहरू खाएर विरोध गर्दै थकित हुनुहुन्छ? यो द्रुत तरकारी कोका प्रयोग गरी हेर्नुहोस्। स्वादिष्ट र रमाईलो।
के तपाइँ सम्पूर्ण परिवारको लागि एक नुस्खा तयार गर्न चाहानुहुन्छ? यो ग्रीक मौसाका मासु, टमाटर सॉस र एग्प्लान्ट को तहहरूको साथ प्रयास गर्नुहोस् ... स्वादिष्ट!
के तपाइँ एक स्वादिष्ट नुस्खा खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँको रेखाको ख्याल राख्छ? यो फल र पास्ता सलाद प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं अग्रिम यो गर्न सक्नुहुन्छ।
Vichyssoise लीक र आलुको साथ एक नुस्खा हो जुन तपाइँले वर्षको कुनै पनि समयमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तातो र चिसो दुवै लिन सक्नुहुन्छ।
बटर रोस्टेड च्याउ maître d'hôtel
Maître d'hôtel बटर-भुनी मशरूम एक साधारण नुस्खा हो, एक स्वादिष्ट स्वाद संग र १ 15 मिनेट भन्दा कम मा तयार छ।
एक जापानी स्पर्श संग रूसी सलाद
जापानी स्पर्शको साथ यो रूसी सलाद नेत्रहीन छ। यो चावल सिरका, जापानी मेयोनेज, र नोरी समुद्री शैवालको साथ स्वाद र बारीकियोंले भरिएको छ।
फूलगोभी स्यान्डविच काटिएको रोटीको विकल्प हो जुन तपाईंको बच्चाहरूले मनपर्दछ। तरकारीहरू समावेश गर्ने एक सजिलो र स्वादिष्ट तरीका।
यो शानदार मलाईदार पालक नुस्खा प्रयास गर्नुहोस्। एक सरल र उत्कृष्ट पकवान जो दुबै बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि अपील गर्दछ।
मेयोनेस ससको साथ फूलगोभी
के तपाईं एक साधारण तरकारी आधारित डिनर तयार गर्न चाहनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई मेयोनेज सॉसको साथ फूलगोभीको लागि यो नुस्खा प्रस्ताव गर्दछौं।
उमालेको तरकारीको साथ हाक को लागि यो नुस्खा एक स्वस्थ, छिटो र धेरै पूर्ण नुस्खा हो आफ्नो स्वादको आनन्द लिनुहोस्।
Zucchini, मशरूम र बाख्रा पनीर cannelloni
यी zucchini, मशरूम र बाखार पनीर cannelloni बिना पास्ता र Bechamel बिना बनाएको तपाईं आश्चर्यचकित हुनेछ।
बदामको साथ Zucchini र आम सलाद
यो Zucchini मैंग बदाम सलाद एक मोड़ संग खाद्यहरु को लागी एक विदेशी र स्वादिष्ट पकवान हुनेछ।
चटनीमा च्याउको लागि पकाउने एक शाकाहारी स्टार्टर, धनी र बनाउन धेरै सजिलो छ। यस चरण-देखि-चरण नुस्खाको साथ तपाईं आफ्नो औंलाहरू दुब्लाउँनुहुनेछ।
तरकारी र सोया सॉसको साथ सर्पिलहरू
तरकारी र सोया सॉसको साथ सर्पिल पास्ता सलाद एक सरल र सन्तुलित पकवान हो। काम गर्न वा समुद्र तटमा लिनको लागि आदर्श।
टार्टर सॉसको साथ फूलगोभी
टार्टर सॉसको साथ फूलगोभी रात्रिभोजको लागि एक उत्तम विकल्प हो, स्वादहरूको धेरै धनी संयोजनको साथ सजिलो विधि।
कडा-उमालेको अण्डाको साथ लीक्स
कडा उमालेको अण्डाको साथ लीकहरूको लागि यो नुस्खाको साथ, भारोमामा बनेको, तपाईंसँग यसको सबै गुणहरू भएको साधारण डिश हुनेछ।
हल्का चटनीको साथ तरकारी सलाद
तपाईं यसको स्वादको लागि यो सलाद मनपराउनुहुनेछ र किनभने यो यो भन्दा कम क्यालोरीक हुन सक्छ। यो वरोमामा तैयार छ र केहि चरणहरू अनुसरण गर्दै।
रसियन सलाद एक गर्मी क्लासिक हो। एक सजिलो र रिच नुस्खा। चाहे काममा, समुद्र तट वा पूलमा बाहिर खानको लागि आदर्श।
पोमोडोरो स्पेगेटीको साथ मिलानीस औबर्गिनहरू
पोमोडोरो सॉसमा स्पागेट्टीको साथ क्रिस्पी र क्रीमयुक्त एबर्जिन मिलानीस। एक प्रामाणिक र घरेलु स्वाद।
मिठो मकैको साथ १० रेसिपीहरू जसले तपाईंलाई चकित पार्नेछ
मिठाई मकको साथ यी १० रेसिपीहरूले यसको सरलता र स्वादको साथ तपाईंलाई चकित पार्नेछ। एक विविध आहार को लागी धेरै विचारहरु।
बच्चाहरूका लागि पास्ता, तरकारीहरू र झींगासँग
बच्चाहरूको लागि यो पास्ता बुढेसकाललाई पनि मनपर्दछ। यसमा गाजर, कद्दू, अजमोद र झींगा छ। यो क्रीमयुक्त छ र minutes० मिनेट लिन्छ।
बेकनको साथ ब्रोकोली, लीक र कद्दूको क्रीम
आज यो ब्रोकोली, कद्दू र अजवाइन को क्रीम तयार गर्ने समय हो। तिनीहरू मासु हुन सक्छ कि एक शोरबा मा पकाइनेछ, ...
द्रुत तरकारी पाई
यो द्रुत तरकारी केकको साथ तपाईंसँग स्टार्टर वा साधारण गार्निश हुनेछ जुन पोषक र र and्गले भरिएको छ।
आलु संग हाक
आलुको साथ ह्याक एक उत्तम नुस्खा हो जुन हल्का र स्वस्थ डिनरको लागि उत्तम हो। प्लस यो minutes० मिनेटमा तयार छ।
थर्मामिक्स भेरोमामा बनेका स्टीम्ड जंगली शतावरीहरू बनाउन यत्ति सजिलो छ कि त्यसले तपाईंलाई चकित पार्नेछ।
ह्यामको साथ गोभी
छिटो र स्वस्थ डिनर? Recipe० मिनेट भन्दा कममा ह्यामको साथ कुटेको बन्दकोबीको यस नुस्खाको साथ तपाईंसँग यो तयार हुनेछ।
लेमन आर्टिचोकस एक स्वस्थ र हल्का नुस्खा हो जुन तपाईंलाई एक सरल तरीकाले स्वस्थ र सन्तुलित आहार लिन मद्दत गर्दछ।
गोभी रोलहरू टूनाले भरिएको
यी टूना भरिएका बन्दकोबी रोलहरू स्वस्थ र अनौपचारिक विकल्प हुन् जसले तपाईंलाई अधिक तरकारीहरू र माछा खान मद्दत गर्दछ।
गैलिशियन बन्दकोबी एक्सप्रेस ब्रोथ
Thermomix को साथ एक राम्रो गलिसियाई बन्दकोटी एक्सप्रेस ब्रोथको तयारी धेरै सरल छ र minutes 45 मिनेट भन्दा कममा तपाईंसँग ...
सबैको लागि एक नुस्खा ब्रोकोली, दलिया र नटहरू द्वारा बनाईएको। तिनीहरूलाई कुसुस वा सेतो चामलको साथ परोवा सकिन्छ।
पालक संग खैरो चावल
पालक संग खैरो चावल Thermomix को साथ बनाउन र काम वा स्कूल मा खानको लागि आदर्श एक साधारण पकवान हो।
हल्का तरकारी क्रीम, प्रयोगको एक नुस्खा
फ्रिज खोल्नुहोस् र निर्णय गर्नुहोस् कि तपाईं कुन तरकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ। बाँकी अझ सरल छ। परिणाम, एक हल्का र धनी क्रीम।
हरियो बीन र आलु पाई
हरियो सिमीको एक धेरै नै मूल र पूरा पहिलो पाठ्यक्रम। यसमा आलु, पेस्टो, मासु, चीज, अण्डा र दुध पनि छ।
चिकन र कद्दू र टमाटर सॉसको साथ पास्ता
कद्दू र टमाटर सॉसको साथ पास्ता तरकारीहरूसँग बच्चोंले मनपराउने एक पूरै डिश हो।
मशरूमहरू नीलो चीज र अखरोटले भरिएका छन्
निलो पनीर र अखरोटले भरिएका यी च्याउहरू स्वादिष्ट छन्। तिनीहरू पनि यति छिटो र सरल छन् कि तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न।
केवल शानदार aubergin parmesan
एग्प्लान्ट परमेसन इटालियन पाक कलाको एक विशिष्ट डिश हो, एग्प्लान्ट र घरमा बनाइएको टमाटर सॉसको तहहरूको साथ।
साल्पसीनमा यी सिपीहरू तपाईंको Thermomix को साथ बनाउनको लागि एक धेरै व्यावहारिक, प्रकाश र सजिलो आधारभूत विधि हो।
भरिएको चिकन पट्टिका
यो स्वादिष्ट भरिएको चिकन फिललेट थर्मोमिक्समा स्तरहरूमा पकाएर चाँडो र सजीलो रूपमा तयार पारिन्छ।
आलु संग लीक्स
के तपाईंलाई थाहा छ आलुका साथ यी लीकहरू स्वस्थ शाकाहारी भोजनको लागि एक उत्तम नुस्खा हो जुन २ 25 मिनेट भन्दा कममा तयार हुन्छ?
यो भुटेको कद्दूको साथ तयार छ र हेलोवीन कद्दुको पल्प वा अरू कुनै पनि विविधताको पल्प प्रयोग गर्नका लागि एक राम्रो विधि हो।
तरकारीको साथ माउ मासु
तरकारीको साथ स्ट्युफ गाईको लागि यो नुस्खा सजिलो, सरल र स्वादिष्ट हुन्छ। अफिसमा खानका लागि उत्तम।
औबरजिन कालो हलवा
औबर्जिन कालो हलवा शाकाहारी एपेटाइजर हो जुन तपाईं पहिले दिन बनाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको थर्मोमिक्सको साथ झन्डै एक्लो बनाईन्छ।
9 स्वादिष्ट र आश्चर्यजनक फूलगोभी को व्यंजनहरु
यहाँ9स्वादिष्ट र आश्चर्यजनक फूलगोभी को व्यंजनहरु छन्। Thermomix को साथ स्वादिष्ट व्यंजनहरु बनाउन निश्चित संकलन।
चार रंग क्रीम
Thermomix को साथ बनेको यो चार-र cream्ग क्रीम, तपाइँका बच्चाहरूलाई तरकारीको साथ रमाईलोको लागी धेरै मनमोहक र रमाईलो छ।
प्याज मासु र बेकनले भरिएको छ
मासु र बेकनले भरिएको प्याजहरू बनाउन सजिलो हुन्छ र तपाईं तिनीहरूलाई अग्रिम बनाउन सक्नुहुनेछ।
एक प्रामाणिक कुखुराको ब्रोथ तयार गर्नुहोस Thermomix को साथ कहिल्यै सजिलो छैन। एक नुस्खा जो सूप र स्टूको आधारको रूपमा काम गर्दछ।
Auergines parmesan पत्ता लगाउनुहोस्, तरकारीमा आधारित एक सरल र स्वादिष्ट नुस्खा जुन पूरै परिवारले मनपर्नेछ।
आलुको साथ स्विस चार्ट
आलु संग चार्ट एक स्वस्थ र प्रकाश नुस्खा हो कि खानाको लागि महान हो र तपाइँ Thermomix को साथ सजीलै बनाउन सक्नुहुन्छ।
कुखुराको साथ तरकारी सूप
यो तरकारी क्रीम संग कुखुरा संग तपाईं संग, Thermomix, एक पौष्टिक र सजिलो दुबै बच्चाहरु र वयस्क को लागी हुनेछ।
लेटस, फेटा चीज, पुदिना, काकडी, बदाम, जैतून र टोस्टको साथ छोची सलाद, एक ताहिनी र निम्बूको ड्रेसिंगको साथ।
टमाटरको साथ हरियो सिमीहरू थर्मोमिक्सले बनेको थाल हो, जसबाट तपाईंले आफ्ना बच्चाहरूलाई तरकारी खान पाउनुहुनेछ।
Zucchini को क्रीम
Thermomix संग बनेको Zucchini क्रीम यती धनी र बनाउन को लागी सजीलो छ कि यो तपाईंको भान्छा मा एक मुख्य हुनेछ।
भरिएको aubergines Thermomix र एक डिश यति पूर्ण संग बनाउन को लागी एक सजिलो नुस्खा हो कि तपाईं यसलाई एक एकल डिशको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
क्रिस्पी र सुगन्धित zucchini चिप्स चुली भट्टीमा पकाइन्छ। एक अविश्वसनीय स्वास्थ्य, छिटो र सरल विधि।
पालक संग9विचारहरु जुन सँधै सफल हुन्छ
पालकसँग यी ideas विचारहरूको साथ जुन सँधै सफल हुन्छ, तपाईंसँग तपाईंको परिवारलाई स्वादिष्ट व्यंजनहरू चकित पार्न पर्याप्त स्रोतहरू हुनेछन्।
भेरोमामा माछा र तरकारीहरूको पूर्ण प्लेट
भेरोमा माछा र तरकारीहरूको पूर्ण प्लेट तयार गर्नुहोस् तपाईंको Thermomix को साथ धेरै सरल छ। स्वस्थ हुनुको अलावा, यो विधि सरल छ।
राटाटुइल र पोच अण्डाको साथ चामलहरू बच्चाहरू मन पराउने पूर्ण विधि हो। Thermomix को साथ कदम मिलाएर विधि विधि पत्ता लगाउनुहोस्।
थर्मोमिक्समा रातो खुर्सानीको साथ great उत्कृष्ट रेसिपीहरू
Thermomix मा बनेको रातो खुर्सानी को लागी9महान व्यंजनहरु। रंगीन, विविध, सरल र धेरै धनी।
आजको भिडियोमा हामी तपाईंलाई घरको भाँडाकुँडा तयार गर्न कत्तिको सजिलो छ भनेर देखाउँदछौं। थर्मोमिक्समा हामी यो गर्नेछौं ...
Zucchini मजा लिन9विभिन्न व्यंजनहरु
यस कम्पाइलेशनमा तपाईंले zucchini को मजा लिन different बिभिन्न रेसिपीहरू पाउनुहुनेछ। थर्मोमिक्सको साथ बनाउनको लागि मूल र धेरै सजिलो विकल्प।
सबै फरक र सबै स्वादिष्ट। यी प्रत्येक भाँडाको नायक नाउबर्जिन हो: हामी यसलाई टमाटरले बनाउनेछौं प्याट्टिमा पेस्टोको रूपमा ...
कस्कोस र सिमीका साथ तरकारीहरू
यसमा गाजर, जुचीनी, स्क्वाश, हरियो बीन्स छन् ... र यी सबै तरकारीहरू उमालेको छ। हामी तिनीहरूलाई क्युसस र सिमीको साथ सेवा गर्नेछौं।
नायकको रूपमा फूलगोभीको साथ भिन्न गार्निश। यो तातो वा चिसो सेवा गर्न सकिन्छ र मासु र माछा भाँडा संग संग आदर्श छ।
कुखुरा, स्याउ र पालक संग न्यानो सलाद
स्वादिष्ट तातो कुखुरा, स्याउ र पालक सलाद। एक स्वस्थ विधि जुन तपाइँ तपाइँको Thermomix को साथ छिटो र सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ।
9 भरिएका Veggie रेसिपीहरू सबै बर्ष मा मजा लिन
भरिएका तरकारीहरूको यो कम्पाइलेसनको साथ तपाईसँग थर्मोमिक्सको साथ वर्षभरि तयार गर्न केही विचारहरू हुन्छन्।
तरकारीहरुका साथ sp स्पंज केक जुन तपाईलाई चकित पार्नुहुनेछ
यी तरकारीहरूसँग स्पन्ज केकहरू हुन् जसले तपाईंलाई तिनीहरूको बनावट र स्वादको साथ आश्चर्यचकित गर्दछ। तपाइँको Thermomix लाई धन्यवाद गर्न अब सजिलो छ।
फूलगोभी, बेकन र चीज प्यानकेक्स
यी फूलगोभी, बेकन र चीज प्यानकेक्स मूल, भिन्न र स्वादिष्ट हुन्। र सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको ती तरकारीहरूसँग बनेको हो !!
मसि मटर वा अंग्रेजी शैली मटर गार्निश
मूसी मटर एक विशिष्ट ब्रिटिश डिश हो जुन मासु र माछाको भाँडा माझ्ने सहयोगीको रूपमा सेवा गरिन्छ। क्रीम, पुदीना र निम्बूको साथ यो एक वास्तविक आनन्द हो।
ह्यामको साथ लहसुन च्याउ
ह्यामको साथ लसुन मशरूम Thermomix को साथ बनाउन को लागी धेरै सजिलो छ। तिनीहरू एक्लै वा गार्निशको रूपमा सेवा दिनको लागि रसदार हुन्छन्।
एगप्लान्ट पार्मेसन क्रोकोन्टीको टचको साथ
बदाम, ब्रेडक्रम्ब्स र मसलाको क्रन्चि टचको साथ एक्जिसिट एबर्गेन्स पार्मेसन। पहिलो पाठ्यक्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्न एक उत्तम डिश।
गाजरको साथ original मूल रेसिपीहरू
नौ मौलिक र गजबको गाजर रेसिपीहरू जसले हामीलाई यो अविश्वसनीय खानाको सबै फाइदाहरूको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
टमाटर चुरा संग फूलगोभी
हामी फूलगोभीलाई थर्मोमिक्समा पकाउनेछौं र त्यसपछि हामी यसलाई नुनको चुचोले पिठो पकाउछौं पीठोको पिठोसँगै।
लसुन चची सासको साथ ब्रोकोली
हामी ग्लासमा ब्रोकोली पकाउनेछौं र हामी यसमा सॉस पनि तयार पार्नेछौं। एक सरल नुस्खा, तयार गर्न सजिलो र स्वाद धन्यवाद स्वाद को साथ लोड
तरकारी र छोले कोसूस
यो नुस्खा तयार गर्न हामी केवल हाम्रो Thermomix को गिलास प्रयोग गर्नेछौं। यो स्वादले भरिएको छ, यो स्वस्थ छ र यसको मसलादार स्पर्श छ जुन तपाईंलाई मनपर्नेछ।
Zucchini र कोको स्पंज केक
यस रसीला zucchini र कोको केकको साथ तपाईंको परिवारलाई चकित पार्नुहोस्। एक ग्लूटेन-रहित विधि र Thermomix को साथ बनाउन को लागी सजिलो।
हामीलाई यो नुस्खा पकाउन केहि सामग्रीहरू चाहिन्छ तर हामी एउटा साधारण पालक थाल प्राप्त गर्नेछौं, निश्चित रूपमा, तपाइँ यसलाई माया गर्नुहुनेछ।
Leek, ब्रोकली र हेम Quiche
हाम्रो Quiche, चीज, क्रीम र अण्डा को अतिरिक्त, Leek, ब्रोकोली र पकाएको हेम सामेल हुनेछ। यो धेरै सरल छ किनकि बेस पफ पेस्ट्रीको पाना हुनेछ।
तरकारी, बेकन र चीज केक
यो तरकारी, बेकन र चिज केक Thermomix को साथ बनाउनको लागि छिटो र सजिलो रेसिपी हो जुन तपाईंलाई सम्पूर्ण परिवारको लागि रातीको खानको लागि प्रयोग गर्दछ।
रातो बन्दकोबीको साथ rec रेसिपीहरू, धनी, मूल र धेरै रंगको साथ
यस संकलनमा तपाईले रातो बन्दकोबीले बनेको colorful वटा रंगीन व्यंजनहरू भेट्टाउनुहुनेछ। सरल, मूल र Thermomix मा तैयार।
साधारण रातो गोभी गार्निश
करीव minutes० मिनेटमा हामीसँग रातो रंगको गोभीको रंगीन गार्निश हुनेछ। मासु र माछा साथ गर्न र स्यान्डविच र स्यान्डविच समृद्ध बनाउन को लागी उत्तम।
क्रीमयुक्त मिठाई आलु प्यूरी
क्रीमी मिठाई आलु प्यूरी तपाईंको Thermomix को साथ बनाउनको लागि एक सरल र सजिलो नुस्खा हो। यो क्रीम, केक र अन्य तयारीको लागि आधार हुनेछ।
हरियो बीन केक
सम्पूर्ण परिवारको लागि एक नुस्खा, नमकीन केकमा तरकारीहरू क्यामफ्लाग गरिएको हुन्छ जुन हामी पहिले थर्मोमिक्स र त्यसपछि भट्टीमा पकाउनेछौं।
यस रेसिपी र भिडियो रेसिपीमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी Genoese पेस्टो बनेको छ र कसरी Thermomix मा पास्ता खाना बनाउन। तपाइँले क्याप्रस पास्ता मनपराउनुहुनेछ।
अचार अ Russian्ग्रेजी सलाद
अचारयुक्त बोनिटो, गाजर, अण्डा र मटरको साथ बनाईएको रसियन सलादको लागि स्वादिष्ट विधि। सफलताका लागि आधारभूत सामग्रीहरू।
ब्रसेल्स कटलफिसको साथ अंकुरित छ
गम्भिर स्वादहरु भरिएको प्लेट: कट्टलफिस ब्रसेल्स स्प्राउट्स, हल्दी, घाममा सुकाएको टमाटर ... यसलाई चावल, पास्ता वा पकाएको आलुको साथ सेवा गर्नुहोस् र यो पूर्ण डिश हुनेछ।
आधारभूत नुस्खा: लसुन पेस्ट
यस आधारभूत लहसुन पास्ता नुस्खाको साथ तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र भान्छामा आफैलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्। द्रुत र Thermomix को साथ गर्न को लागी सजिलो।
एबर्जिन र zucchini साथ Ratatouille (वा ratatouille)
थर्मोमिक्समा यो र्याटाउइल (वा रटाटौइल) बनाउन हामी मौसमी तरकारीहरू प्रयोग गर्ने छौं। यो एक धेरै बहुमुखी, स्वस्थ र सस्तो नुस्खा हो।
हरियो सिमी र इटालियन च्याउ
हरियो बीन्स र च्याउको लागि यो इटालियन विधि एक साधारण पकवान हो जुन तपाईं आफ्नो Thermomix को साथ minutes० मिनेट भन्दा कममा बनाउन सक्नुहुन्छ।
मसलादार टमाटर सॉस
मसलादार टमाटर सॉस तपाइँको मनपर्ने व्यंजनहरु को लागी एक विशेष स्पर्श जोड्न आदर्श हो। तपाइँको Thermomix को साथ तैयार गर्न को लागी एक सरल र सजिलो नुस्खा।
पालक र सॉसेज प्याटी
यदि तपाइँ पालक चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ यस इम्मानाडा लाई माया गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। योसँग भर्नको राम्रो मात्रा छ त्यसैले हामी यसलाई सजिलैसँग १२ सर्भिंगमा विभाजन गर्न सक्दछौं।
क्विनोआ, आम र कुखुराको जार सलाद
क्विनोआ, आम र कुखुराको यो जार सलाद र यसको विदेशी ड्रेसिंग एक आदर्श सलाद हो जुन तपाईं लिन चाहानुहुन्छ।
सम्पूर्ण परिवारको लागि एक मूल र धेरै आकर्षक नुस्खा। थर्मोमिक्समा हामी तरकारीहरू साटा गर्छौं र ओभनमा हामी तयारी समाप्त गर्दछौं।
हाम्रो भाँडा माझेर भाँडो प्रयोग गर्नका लागि great महान रेसिपीहरू
अजवाइका सबै सुविधाहरू र गुणहरू यसलाई तपाईंको भान्साकोठामा आवश्यक बनाउँदछ। आज Thermomix साथ9शानदार व्यंजनहरु!
यस गर्मी को लागी १० लेग्यु सलाद
स्फूर्तिदायी, तयार गर्न सजिलो र विविध। त्यसैले यी १० महान लेगुम सलादहरू छन् जुन हामी थर्मोमिक्स प्रयोग गरेर बनाउँदछौं।
क्रिस्पी गाजर सलाद
यो कुरकुरा गाजर सलाद छिटो छ, Thermomix संग बनाउन को लागी सजीलो छ र अफिस मा खान को लागी धेरै सुविधाजनक वा यस गर्मी को समुद्र तट मा लिन को लागी।
मसलादार टमाटर सॉसमा Zucchini स्लाइस
रसिलो र धेरै स्वादिष्ट zucchini स्लाइसिस एक मसलादार स्पर्श संग एक मूल टमाटर सॉस मा पकाइएको। यसलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
टोस्टसँग आदर्श, स्यान्डविच वा स्यान्डविचमा र पक्कै पनि कुनै पनि प्रकारको मासुको लागि गार्निशको रूपमा। यो पनि स्याउ र चिनी छ।
धूम्रपान सामन र anchovies सलाद
यस स्मोक्ड सामन र एन्कोभी सलादको साथ तपाईं यस गर्मीको लागि विचारहरूको कम हुनुहुनेछैन। सम्पूर्ण परिवारको लागि एक नुस्खा र Thermomix को साथ बनाउन को लागी धेरै सजिलो।
स्याउ र एभोकैडो, धनिया र लाइम मेयोनेजको साथ रसियन सलाद
स्याउ र एवोकैडो, धनिया र चूना मेयोनेजको साथ आश्चर्यजनक रूसी सलाद। स्याउको एक ताजा र कुरकुरा स्पर्श संग।
बाख्रा पनीर र रायोको भिनाग्रेटको साथ पास्ता सलाद
बाख्रा पनीर र रायोको भिनाग्रेटको साथ पास्ता सलाद। एक स्वादिष्ट, रंगीन, स्वस्थ, रमाईलो र राम्रोसँग गोल सलाद।
अचारको बैजनी प्याज
अचार ब्ल्याकबेरी प्याज Thermomix को साथ बनाउन को लागी एक धेरै साधारण संरक्षण हो र तपाई अनगिन्ती व्यंजनहरु सँगै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
पालक, ब्लूबेरी र अखरोट पाई
घरेलु आटा र पालक र पागल द्वारा बनाएको भरिने को साथ। यो इम्पानेडा हो कि हामी साधारण दही सॉसको साथ पनि प्रयोग गर्न सक्छौं।
सोया सॉस र अदुवामा हिउँ मटर
स्वादिलो ​​हिउँ मटर भेरोमामा उमाले र लसुन, अदुवा र सोया सॉसको साथ ओरिएन्टल टचहरू सहित। स्वादको एक शो!
मलाईदार लीकहरूसँग चुचुरियो
क्रिस्पी र स्वादिष्ट क्रिम लीकहरूसँग चुरा हुन्छ जुन पखेटाको स्वाद मिसाउँदछ।
पफ पेस्ट्री पाई, पालक र पाइन नट्स
यस पाईले पालक खपत गर्न सबैभन्दा अनिच्छुक व्यक्तिलाई पनि अपील गर्दछ। हामी थर्मोमिक्समा नारिवल तत्त्वहरूको साथमा भर्न तयार गर्दछौं।
Thermomix मा बनेको9तातो सलाद
थर्मोमिक्समा हामी स्वादिष्ट तातो सलादहरू तयार गर्न सक्छौं। हरियो सिमी, आलु, लीक ... संग यो कम्पाइलेसन हामी तपाईंलाई केहि देखाउँछौं।
हामी फूलको फ्ल्यागहरू सरल क्रीमबाट सुरु गर्नेछौं जुन हामी हाम्रो फूड प्रोसेसरमा तयार गर्नेछौं। तरकारीहरू उपभोग गर्न सजिलो र मौलिक तरीका।
एक मौलिक र स्वादिष्ट सलाद हरियो सिमी, गाजर, टुना, अण्डा, टमाटर र जैतूनको साथ बनेको। Thermomix मा तयार गर्न धेरै सरल।
Ratatouille को साथ varoma गर्न सम्राट
सम्राट वा तरवारफिसको स्वस्थ र सन्तुलित डिश भेरोमाको साथ पकाइन्छ र एक स्वादिष्ट रटाटुइलको साथ हुन्छ। एक डिनर को रूप मा आदर्श।
स्वादिष्ट आलु र झींगा सलाद, एक स्टार्टर, खाजा वा डिनरको रूपमा उत्तम। रसिलो, बिभिन्न बनावटका साथ र धेरै धेरै सजिलो।
धेरै फाइदाहरू भएको एपरिटिफ: हामी अघिल्ला दिनहरूदेखि रोटीको फाइदा उठाउनेछौं, यो चुलीमा पकाइन्छ र यो स्वादिलो ​​हुन्छ। हामीलाई एबर्जिन र ग्रेटेड पनीर चाहिन्छ।
आर्टिचोक र सेरानो ह्याम स्ट्यू
यो आर्टिचोक र सेरानो ह्याम स्ट्यूको साथ तपाईं यी शीतकालीन तरकारीहरूका सबै राम्रोबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। Thermomix को साथ एक सरल र सजिलो नुस्खा।
ब्रसेल्स सुक्खा फल संग अंकुरित
हामी यी ब्रसेल्स स्प्राउट्स पकाउछौं र तिनीहरूलाई हाम्रो थर्मोमिक्सको गिलासमा साटाउँछौं। एक सजिलो डिश बनाउनको लागि, एकै समयमा, उत्तम।
नुन ब्रोकली तीखा
ब्रोकोली, बेकन र मोजारेलाको साथ। एक रसिलो, मूल र धेरै धनी नुन केक जुन उनीहरूलाई पनि अपील गर्दछ जो ब्रोकोलीको बारेमा भावुक छैनन्।
ब्रोकोली र स्याउ सलाद
गुणहरूले भरिएको सलाद। यो ब्रोकोली, स्याउ र टमाटरले बनेको छ र तेल, सिरका, सेनेप र महले लगाएको छ।
हामी तपाईंलाई Thermomix मा एक उत्तम नारंगी ससको साथ अक्टोपस कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाउँछौं। ध्यान दिनुहोस् किनकि यो सास कुनै पनि माछाको साथ राम्रोसँग जान्छ।
भेगन क्विनोआ र च्याउ मीटबलहरू
भेगन क्विनोआ र च्याउ मीटबलहरू एक स्वस्थ र सजीलो तरिकाले बनाउने नुस्खा हो जसले तपाईंलाई स्वस्थ जीवनमा फर्कन र स्वादको आनन्द लिन मद्दत गर्दछ।
अखरोट संग फूलगोभी
हामी टोकरीमा फूलगोभी पकाउनेछौं। हामी भट्टीमा तयारी समाप्त गर्छौं, हामी एक थर्मोमिक्समा बनाउने उत्कृष्ट र मूल क्रुम्बलको साथ।
स्वस्थ आलु सलाद र नॉर्डिक सॉसको साथ धूम्रपान साल्मन
आलु, अण्डा, टेन्डर शूट, स्मोक्ड सामन र नर्डिक सासको साथ सजिलो र स्वस्थ सलाद जुन २ 25 मिनेटमा हामी तयार हुन्छौं।
रातो गोभी, गाजर र करी सलाद
यो जाडो सलाद रातो गोभी, गाजर र काजूको साथ बनाईन्छ। तपाईंले भर्खर हामीले बिर्सनु हुँदैन हामीले यसलाई minutes० मिनेट अगाडि नै तयार गर्नुपर्नेछ।
केही कोकरोससँग मिसाउने सामानहरू बटर र तेलको आटा र तरकारीहरू, पेप्रिका र prunes को भरिए
धेरै स्वादिलो ​​तरकारी स्टू
बेकन र स्टू ब्रोथको साथ तरकारी स्ट्यु व्यक्त गर्नुहोस्। स्वादिलो ​​र स्वादिष्ट। यो 30० मिनेट भन्दा कममा पनि तयार हुनेछ।
मशरूम र अखरोट र्यागआउट
म महीनाहरु देखि घर मा यो मशरूम र अखरोट रगआउट बनाउँदैछु। यो शाकाहारी संस्करण हो जुनसँग एक उत्तम स्वाद र बनावट छ र म यसलाई अधिक स्वादिष्ट मशरूम र अखरोट रगआउट बनाउँछु। एक स्वस्थ र स्वस्थ शाकाहारी संस्करण, बनाउन को लागी सजिलो र तपाईं समान रेसिपीहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
कसरी हामी फूलगोभीलाई बिभिन्न तरिकाले तयारी गर्ने भनेर सिकाउँदछौं: उमाले र त्यसपछि अण्डो, चीज, ब्रेडक्रम्ब्स, जडिबुटीको मिश्रणले बेक्ड ...
क्र्याब स्प्याटर ड्रेसिंगको साथ पास्ता सलाद
क्र्याब स्प्लश ड्रेसिंगको साथ पास्ता सलाद - ढुवानी गर्न सजिलो, बच्चाहरू मन पराउँछन्, यो छिटो, कम खर्चिलो छ, र समय अगाडि बनाउन सकिन्छ।
रातो मिर्च मैक्सिकन शैलीको मासुले भरिएको
रातो खुर्सानी मासुले भरिन्छ, नट र फलहरू सिरपमा, मसलादार स्पर्शले हामीलाई मेक्सिकोको सबै स्वाद ल्याउँदछ।
आलु, लीक र रोजमेरी क्रीम
आलुको क्रीम, लीक र रोजमेरी एक असाधारण बनावटको साथ र टुस्ड रोटीको केही टुक्राको साथ अलि तेल र रोजमेरीको साथ सेवा दिइयो।
ब्रसेल्स ह्यामको साथ अंकुरित छ
प्याज र हेमले पकाएको स्वादिष्ट र स्वादिलो ​​ब्रसेल्स स्प्राउट्स, जुन हाम्रो थर्मोमिक्समा वास्तवमै कोमल र रसदार छन्।
चायोटे र यसको हजार र एक नाम।
पोर्तुगालमा मेरो अन्तिम बिदामा मैले शायोट र यसको हजार र एउटा नाम फेला पारे। एक ककुरबिट जसको साथ तपाईं अनगिनत रेसिपीहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अन्वेषण गर्नुहोस् क्यायोट र यसको हजार र एक नामहरू। एक सस्तो तरकारी, पकाउन सजिलो र यसले तपाईंलाई स्वस्थ र सन्तुलित आहार लिन मद्दत गर्दछ।
हरिया बीन्स खाने रमाइलो गर्न great वटा महान रेसिपी
वयस्क र बच्चा दुबैको लागि तपाइँ अधिक स्वादिष्ट हरियो सिमी खानु सक्नुहुन्छ।
हामी थर्मोमिक्समा एक औबर्जिन रिसोटो तयार गर्न जाँदैछौं। यस प्रकारको भाँडामा, मुख्य अवयव (यस अवस्थामा एग्प्लान्ट) यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब हामी तपाईंलाई थर्मोमिक्समा औबर्जिन रिसोटो कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाउँछौं। हामी यसलाई घरेलु ब्रोथ र अर्बेरियो प्रजातिको चामल प्रयोग गरेर बनाउनेछौं।
पतन सुरु हुन्छ ... मशरूम सिजनको साथ !!
शरद theतु केवल कुनाको वरिपरि हो र, त्यसकारण हामी मशरूम र मशरूमको साथ rec रेसिपीहरूको अद्भुत संकलन गर्न यो लेख समर्पित गर्न लाग्छौं।
तपाईंलाई आजको रेसिपी मनपर्नेछ यदि तपाईंलाई तरकारीहरू "अल डेन्टे" मनपर्दछन् किनकि दुवै zucchini र लीक केवल दस मिनेटमा पकाइन्छन्। यसमा लसुन छैन - यदि तपाइँ भर्दुआ अल डेन्टे र धेरै स्वादका साथ चाहनुहुन्छ भने, यी zucchini कोशिस गर्नुहोस्: एक साधारण विधि, केहि सामग्रीहरू र गहन स्वादको साथ।
२ को लागी आलु संग पालक
साधारण रेसिपीहरू कहिले पनि शैलीको शैलीबाट बाहिर जान सक्दैनन् र आलुका साथ यी पालक २ का लागि अनुपस्थित हुन सक्दैन यदि तपाईं पनि राम्रोसँग खान चाहानुहुन्छ भने। र कुरा यो हो कि २ को लागि आलुको साथ यी पालक जस्ता सहज रेसिपीले तपाईंलाई राम्ररी खान मद्दत गर्दछ। यसलाई तपाइँको थर्मोमिक्सको साथ २ix मिनेटमा तयार गर्नुहोस्।
हरियो बीन्स सलाद
सबै सलाद सलाद हुनुपर्दैन, र आजका सलादहरू यसको प्रमाण हुन्। यहाँ हरियो सिमी र आलु मुख्य पात्रहरू हुन् र यदि तपाईं हरियो सिमी बनाउने तरिका परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ वा यदि तपाईं टेबलमा फरक सलाद ल्याउन चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको विधि हो।
ब्रोकोली र anchovies संग पास्ता
एक हप्ताको कुनै दिन बनाउनको लागि पास्ता डिश। ब्रोकली, anchovies र कालो जैतुन संग। स्वाद र गुणहरु संग लोड।
गाजर र टमाटर संग उमालेको हरियो सिमी
एक स्वादिष्ट सब्जी पकवान। हामी गिलासमा टमाटरको सस बनाउँदा हामी भामालाई सिमीमा पकाउने छौं।
भिनाग्रेट र शतावरी क्रीमको साथ पूर्ण ह्याक मेनू
Minutes० मिनेटमा ह्याकको पूर्ण मेनूको आनन्द लिनुहोस् जुन तपाईं स्वस्थ खान सक्नुहुन्छ र तपाईंको Thermomix बाट अधिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
गाजर र अन्तमा गार्निश
कुनै पनि मासु, अण्डा वा माछा डिशको लागि मौलिक गार्निश। गाजर, एक अन्त र मिठो वाइनको साथ। सधैं जस्तो, Thermomix को साथ धेरै सजिलो।
सुकेका टमाटरसहित पोष्ट गरिएको आलु
हामी तपाइँलाई सिकाउँदछौं कि कसरी फरक मौसमी आलु डिश बनाउने। तपाईं सुख्खा टमाटर, चाइभ्स, रायोको र Thermomix मा बनेको मह को ड्रेसिंग को मन पर्छ।
टमाटर संग बैंगन
यसले पहिलो पाठ्यक्रम र गार्निशको रूपमा पनि कार्य गर्दछ। हामीसँग आधा घन्टामा यो तयार हुनेछ र यो साँच्चिकै स्वादिष्ट हुन्छ। तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्नेछ!
नुन शतावरी टार्ट
एक प्यारी केक केहि सामग्री र तयार गर्न सजिलो को साथ बनेको। आधार पफ पेस्ट्री हो र भरी अण्डा, क्रीम, बेकन र शतावरी संग बनेको छ।
रातो गोभी आमलेट
यसको रंग र यसको स्वादको लागि दुबै भिन्न आमलेट। यो रातो बन्दकोबी र एक सानो लीकको साथ बनेको छ ... महान!
एग्प्लान्ट रगत सॉसेज समोसास (वा शाकाहारी रगत सॉसेज)
एबर्जिनको साथ बनाईएको तर रगत सॉसेजको स्वादको साथ एक स्वादिष्ट एपेटाइजर। फिलो आटाले तरकारी सामग्रीहरूसँगै बनाएको यो शानदार मिश्रण लिनेछ।
पिटिएको प्याजको घण्टी
हामी थर्मामिक्समा पिठो बनाउँछौं र त्यसपछि हाम्रो प्याजको घण्टी प्रशस्त सूर्यफूलको तेलमा फ्राई गर्दछौं। सबैलाई रमाउनको लागि रमाईलो खाजा।
अजवाइन र स्याउ सलाद (वाल्डोर्फ सलाद)
हामी तपाईंलाई सिकाउछौं कि कसरी तपाईं थर्मोमिक्समा सलाद तयार पार्नुहुन्छ जुन तपाईंले प्रेम गर्नुहुन्छ: वाल्डोर्फ सलाद। अजवाइन, स्याउ र नटहरू ल्याउनुहोस्।
आर्टिचोकस, अजमोद र बदामको साथ एक फरक पेस्टो। कुनै पनि प्रकारको पास्तासँग सेवा दिन सरल र उत्तम, छोटो वा लामो।
च्याउ सूप को क्रीम
क्रीम बिना मशरूम क्रीमको घरेलु क्रीमको लागि नुस्खा, Thermomix को साथ बनाउन को लागी तयार छ र यदि तपाईं आहारमा हुनुहुन्छ भने एक हल्का पहिलो पाठ्यक्रम प्राप्त गर्नुहोस्। हामी भिडियोमा यस मशरूम क्रीम कसरी बनाउने र चरण-चरणमा वर्णन गर्दछौं। धेरै धनी र बनाउन सजिलो।
वसन्त तरकारी र सागपात
वसन्त तरकारीहरू पहिले नै हाम्रो बजारमा आइपुगेका छन्। यसको गुणहरू पत्ता लगाउनुहोस् र स्वादिष्ट मौसमी अवयवहरूको आनन्द लिनुहोस्।
पनीर बेकमेल संग सौंफ
उमालेको सौंफ एक हल्का पनीर बेकमेलको साथ शीर्ष। हामीले भट्टीमा पकाउने काम सिध्याउने एउटा उत्तम डिश, ताकि यो आउग्रिन हो।
पालक विशेषताहरू, गुणहरू ... र कसरी त्रुटिले पोपेइलाई जन्म दियो
हामी पालुवाको बारेमा सबै कुरा वर्णन गर्दछौं: कसरी यसलाई छनौट गर्ने, कसरी पकाउने, यसको उत्पत्ति, यसको गुणहरू ... र पोपेयको ईतिहास पनि।
ब्रसेल्स PEAR र Plums संग स्प्राउट्स
ब्रसेल्स PEAR र Plums संग स्प्राउट्स। एक तरकारी पकवान जहाँ हामी स्टूको स्वाद अझ तीव्र बनाउन फलहरू समावेश गर्दछौं, मीठो र मीठो स्पर्श प्रदान गर्दै।
प्याज तपाईको भान्साकोठामा आवश्यक छ।
प्याजको सबै फाइदाहरू, युक्तिहरू र सम्पत्तीहरू पत्ता लगाउनुहोस्। एउटा आधारभूत घटक जुन तपाईंको दैनिक भान्छामा हराउन मिल्दैन।
नाशपाती, किशमिश र अखरोटको साथ बन्दकोटी
एक sautéed गोभी तर नाशपाती र किशमिश संग। स्वाद र सम्पत्तीले भरिएको एक शाकाहारी रेसिपी। अन्तमा केहि नटहरू थप्नुहोस्, तपाईं उनीहरू कति राम्रा देख्नुहुनेछ।
तनदुरी मसाला फूलगोभी
यस तनदुरी मसाला फूलगोभी रेसिपीको साथ तपाईं एक सरल, मसलादार र थोरै मसलादार पकवानको आनन्द लिनुहुनेछ। Thermomix को साथ गर्न सजिलो।
जुनिपरको साथ क्रीमयुक्त मैश गाजर
गाजर र आलुबाट बनेको क्रीमी संगत पुरी र जुनिपर बेरीको स्वाद। यो मासु र माछा भाँडा संग आदर्श संगति हो।
जार सलाद: सलाद खाने नयाँ तरीका?
हामी सलादमा नयाँ प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्दछौं: जार सलाद वा सलाद डु a्गामा लिनका लागि। त्यसोभए तपाईं जहिले पनि काममा वा फिल्डमा ताजा र क्रन्की सलादको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
लसुन लसुन मशरूम। एक नुस्खा यस्तो स्वस्थ र Thermomix को साथ बनाउन को लागी सरल छ कि यो तपाईंको नुस्खा किताब मा एक संदर्भ बन्नेछ।
लहसुन चामलको साथ Zucchini raatatouille
Zucchini raatatouille, हाम्रो आहार र सानाको को तरकारी समावेश गर्न आदर्श। चामलसँग लसुनको गन्धको साथ यो उत्तम छ!
गाजर, कद्दू र अजवाइन को चिकनी क्रीम
गाजर, कद्दू र अजवाइनको साथ बनेको मिठो र सरल क्रीम। धेरै धनी र राम्रो बनावटको साथ, हामीले थर्मोमिक्समा तयारी गर्ने सबै क्रीमहरू जस्तै।
एक तरकारी संग एक साधारण पकवान जो अब सबै भन्दा राम्रो मा छ: शलगम साग। हामी तिनीहरूलाई कसरी छनौट गर्ने बारेमा वर्णन गर्दछौं, उनीहरूका सम्पत्तीहरू र कसरी तिनीहरूलाई थर्मोमिक्समा पकाउन सकिन्छ।
आलुको साथ मटर राख
आलुको साथ मटर एक पुरा र स्वादिष्ट पकवानमा परम्परागत खानाको सबै स्वाद जुन वर्षको यस चिसो समयमा हामीलाई न्यानो पार्दछ।
बादाम सासको साथ उकालेको तरकारीहरू
यी बाफयुक्त तरकारीहरू बदाम सासको साथ तपाईंसँग शाकाहारी, स्वस्थ र हल्का डिनर हुनेछ। Thermomix को साथ आफैको हेरचाह गर्न धेरै सजिलो छ।
ब्रोकोली संग9व्यंजनहरु
ब्रोकोलीले बनेका great वटा महान रेसिपीहरू: पास्तासँग, सलादमा, स्मूदीको रूपमा, नुनको केकमा ... र ती सबै थर्मोमिक्समा बनेका छन्।